Imtixaanka Fire Qalabka, ololi Tijaabiyaha - skyline
DONGGUAN skyline warshadaha CO., LTD.
Rearch by Codsiyada
sal-dhigida ISO5660 koorta Calorimeter Falanqaynta Instrument Waayo, Heat Release Product oo ka mid ah tallaabooyinka koorta Calorimeter koorta Calorimeter kululeeyo heerka sii daayo (HRR), sii daayo qiiqa, waqti ka suuroggalaan, isticmaalka ogsijiin, carbon monoxide iyo jiilka carbon dioxide iyo heerka khasaaraha mass markii tijaabada la kulmin khayraadka of kululeeyaha toobinta.
Single Gubidda Item ololi Imtixaanka Qalabka
Item Gubidda Single Imtixaanka ololi Qalabka la ahama Steel Gas Ururinta sal-dhigida Hood Product of Single Gubidda Item ee The Single Gubidda Item (SBI), waa hab ka mid ah baaritaanka lagu ogaanayo falcelinta dhaqanka dab dhismaha alaabta (marka laga reebo floorings) markii loo feydo ah weerar kaamerada by item oo dab ka ololayo hal (gubi ciid-sanduuq bixisey propane). muunada ayaa loo soo dhajinta on tarooli la taagan yahay in jir ah dureeri nidaamka qaaca ah. falcelinta ee soo xareeyo si gubi la socdo instrumentally iyo aragga. heerka Heat iyo sii daayo qiiqa waxaa instrumentally qiyaasay iyo astaamaha lagu qiimeeyo in ayadoo la eegayo.
Bunched Cable Vertical Abuulahab, Tijaabiyaha
Bunched Cable Vertical Abuulahab, Tijaabiyaha hordhac ahama Steel Test Box Product of Cable Vertical Abuulahab, Bunched Cable Vertical Abuulahab, Tijaabiyaha Bunched ku Faafidda Tijaabiyaha waa taxane ah oo waafaqsan IEC 60332-3-10 (Qaybta A ~ D) heerarka. Baaritaanku wuxuu cabbirayaa ballaarinta olol vertical in cable ee elektaroonik ah ama optically toosan ama silig la isticmaalayo isha suuroggalaan caadiga ah halka qeybinayay xaddi gaar ah oo hawada qolkii ah ee mugga la qeexay. Intaa waxaa dheer, haddii cable bunched olol toosan tijaabiyeyaal faafinta gubi waxaa laga beddelo 20 digrii angle, waxay noqon kartaa qiyaas ka yar IEEE 383 (IEEE 1202) Heerka. Sidoo kale, haddii Facility Heat Release ku lifaaqan, waxa ay cabbiri kartaa dhaqdhaqaaqa dab qiimaha sida HRR (Heat Release Rate), SPR (Qiiqa Production Rate) iyo wixii la mid ah.
Dhismaha Waxyaabaha Mugga Smoke Tijaabiyaha
Dhismaha Waxyaabaha Mugga Smoke Tijaabiyaha sida ay Profile ASTM Product D2843 ee Dhismaha Waxyaabaha Mugga Smoke Tijaabiyaha The ahaatid cufnaanta qiiq dhiso qalabka waxaa lagu horumariyaa by Rohm Haas Company of America xakamaynta gudaha. Waxaa loo sameeyay 1970 sida ay caadiga ah D2843 ASTM. Its salaysan teori waa sharciga Billumber ee, la, qiiqa soo saaray waxyaabaha gubanaya si toos ah u saamaysay olol, iyo wax lays iftiinka waa gaashaan ka dib markii qalabka gubanaya. Heerka xad-dhaaf ah waxaa ka dibna loo isticmaalo si loo ogaado qiimaha cufnaanta qiiqa (JDS). Waqtigan xaadirka ah, dheeraad ah iyo codsiyada ka badan ayaa soo maray GB qaranka Heerka 8624, imtixaanka ugu cufnaanta qiiq ah sanduuqa battariga PVC, laakiin sidoo kale imtixaanka waxqabadka cufnaanta qiiq ah qalabka gudaha baabuurta.
DONGGUAN skyline warshadaha CO., LTD. waa Hogaamiyaha Shiinaha South a in design, wax soo saarka iyo adeegyada kala duwan ee guddiga of xal imtixaan tayo sare leh, waayo, Imtixaanka Fire Qalabka a.
howlgalka Our waa inay bixiyaan tayada sare Fire Imtixaanka Qalabka iyo complete xal baaro qalabka Dhismaha, duulista, biraha, IMO, Furniture, iyo fiilooyinka & Warshadaha waayirada '. Si ay u bixiyaan xalka ugu fiican si ay u caawiyaan dadka macaamiisha noo ah in la yareeyo khasaaraha ay sabab u tahay dab.
Our Vision waa in ay naqshadeeye ugu guulaha Waa fikrad, iyo dareen iyo soo saaraha ah ee xal jirrabaya by had iyo jeer aad iyo aad u koritaanka warshadaha iyo in tixraac dunida oo dhan ee alaabta iyo adeegyada.
Skyline bilaabay in ay qorshayso iyo wax soo saarka qalabka jirrabaya tan iyo 2008. Waayo, horumarinta sano ee ', gaar ahaan inta lagu jiro wada-shaqayn la shaybaar badan xisbiyada 3aad iyo shisheeye saaraha-dhamaadka sare, waxay na siiyaa badan oo supervisions iyo kaalmo, waxaan u ururay imtixaanka ugu fiican waayo-aragnimo iyo farsamada khaaska, iyo this aasaasay salaysan dhawaaqa ah ee na si ay u bixiyaan adeeg kaamil ah. Arrimaha bulshada maqaalka
Waxaan nahay iibiya ee dalkaas, SGS, Standards Hay'adda reer binu Israa'iil, Intertek, BV, TUV, Hasbro, Mattel. Ku dhawaad 100% qalabka baaritaanka alaabta lagu ciyaaro ee shaybaaro kor ku xusan waxaa lagu iibsaday skyline. Waxay u taagan yihiin heerka ugu sareeya ee alaabta lagu imtixaami beerta. Waxaa sharaf noo ah iyo kuwa kibirka qalabka qeybinayay si ay ula kulmaan shuruudo imtixaanka ay.
Imtixaanka Tunnel Steiner nabadgelyada
Imtixaanka Panel iftiimeen Gogosha nabadgelyada
NBS Mugga Smoke Chamber
Cinwaanka: 3 / F 2aad Dhismaha Minghui Degmada Industrial Zhongwuwei Niushan Dongcheng Dongguan, Guangdong 523128 Shiinaha